Xiddiga Barcelona Ee Mustaqbalkiisa Mugdigu Galay Kaddib Ciyaartii El Clasico Ee Xalay - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaXiddiga Barcelona Ee Mustaqbalkiisa Mugdigu Galay Kaddib Ciyaartii El Clasico Ee Xalay
Xiddiga Barcelona Ee Mustaqbalkiisa Mugdigu Galay Kaddib Ciyaartii El Clasico Ee Xalay
January 13, 2022 Abdiwahab Ahmed
Kaddib ciyaartii Supercopa de Espana ee El Clasico ee Barcelona iyo Real Madrid, waxa uu mustaqbalkiisu mugdi galay xiddig ka tirsan Barcelona oo la sheegay inay soo food-saartay hubanti la’aan.
Xavi Hernandez ayaa waqti hore beddelay kubbad-sameeyaha reer Netherlands ee Frenkie de Jong, waxaana soo baxaya warar sheegaya inay suurtogal tahay in laacibkani uu dheelay kulankiisii ugu dambeeyey ee Barcelona.
Inkasta oo ay da’diisu yar tahay, isla markaana uu bandhig fiican ka samaynayey garoomada xilli-ciyaareedkan, haddana sida uu qoray wargeyska Marca ee kasoo baxa Spain, waxa suurtogal ah in Frenkie de Jong la tuso albaabka bixitaanka oo uu ka tago kooxda.
Barcelona oo ay dib ugu soo laabteen Ansu Fati iyo Pedri ayaa waxa kale oo ay diiwaangashatay Ferran Torres, halka uu da’yarka Ez Abde uu bandhig heersare ah ka sameeyey qaybtii labaad ee uu beddelka kusoo galay.
Mucjisada khadka dhexe ee Gavi oo lagu daray Nico Gonzalez ayaa waxay dhibaato ku keenayaan Frenkie de Jong oo uu Xavi ka fiirsanayo inuu ciyaarsiiyo mar kale, sababtoo ah, waxa uu doonayaa inuu ciyaarsiiyo laacibiinta ay ku badan tahay weerar-geynta kubaddu, isla markaana uu kubbad-burburinta u daayo Sergio Busquets.
Soo laabashada Pedri, Gavi oo hore usii joogay iyo Sergio Busquets oo khibraddiisa ku kaba ayaa ah saddexda khad dhexe ee uu doonayo inay badhtamaha garoonka ka ciyaaraan, halka weerarkana Ansu Fati, Ferran Torres iyo Memphis Depay uu ku aaminayo.
Marca waxa uu sheegay in sababta ugu weyn ee Frenkie de Jong ay Barcelona uga fiirsanayso inay iibiso ay tahay duruufo dhaqaale oo ka jira naadiga.